Mandrava Fandefasana Lahatsary An-Tserasera Mivantana Ireo Shinoa Mpanao Sivana, Anisan’izany Ny Fihinanana Akondro Amin’ny Fomba Erotika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2016 20:00 GMT
Mpisera YouTube iray monina ao London antsoina hoe Phil Watson no namoaka lahatsarin'ny tenany mihinana akondro eo ivelan'ny Masoivoho Shinoa ho fanoherana ny fanapenam-bava farany nataon'i Beijing manao lasibatra ireo mpandefa mivantana amin'ny aterineto “zavatra hafahafa”.
Mihabetsaka ny ao Shina tao anatin'izay taona vitsivitsy izay ny mpiserasera nampiasa fandefasana lahatsary mivantana amin'ny aterineto, maro amin'ireo ny manasongadina vehivavy. Raha atao ny salanisan'ny minitra lany dia mandany eo amin'ny 135 minitra isan'andro eo ny mpijery ireny karazam-pampisehoana ireny.
Ny 60 isanjaton'ny mpijery dia latsaky ny 22 taona ary ny 77 isanjatony no lehilahy. Mety mahazo hatramin'ny 10.000 yuan (tokony ho $1.500) isam-bolana ireo mpanatontosa malaza amin'izany, ny ankamaroany dia vola fankasitrahana avy amin'ny mpankasitraka azy ireo, eny fa na dia miteraka fidirambola amin'ny alalan'ny dokambarotra sy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ireo orinasan-dalao ihany koa aza ireo sehatra ireo.
Nanomboka nanenjika izay votoaty “tsy ara-dalàna” ny manampahefana tamin'ny Febroary 2016, nikendry ireo sehatra mpandefa fandaharana mivantana an-tserasera. Amin'ity raharaha ity, tafiditra ao amin'ny votoaty tsy ara-dalàna ny fandefasana mivantana tsy nahazoana alalana tantara tsangana amin'ny fahitalavitra na tati-baovao, teny tsy maotona, fitafiana “tsy antonona” ny fandaharana (mpanolotra fandaharana hita eo amin'ny fakantsary amin'ny akanjo anatiny na amin'ny akanjo maivana, ohatra) ary ny mihinana akondro na maka sary miaraka amin'ny akondro amin'ny fomba “mihantsy”.
Namoaka tantara mamelabelatra ny hoe tahaka ny ahoana tokoa ny fomba fiasan'ny mpanasivana tranonkala mijery ireo votoaty mandeha mivantana ny gazety iray tao an-toerana antsoina hoe New Express, tamin'ny 5 mey. Amin'ny orinasa tokana monja, dia olona tokony ho 80 no miasa aminy hanasivana izay fandaharana mandeha. Ny votoaty alefa mivantana an-tserasera rehetra dia tsapain'ny fitaovana mpamantatra feo sy sary alohan'ny andalovany amin'ny ekipa mpanasivana olombelona.
Ny mpikambana tsirairay isaky ny ekipa dia tsy maintsy mijery dikasary avy amin'ny votoaty mandeha mivantana mihoatra ny 60.000 isan'ora. Miezaka ny ekipa hanakatona ao anatin'ny 20 segondra izay votoaty tsy manara-dalàna aorian'ny fanombohany, araka ny voalaza ao amin'ny tantaran'ny New Express. Tsy nambaran'ny lahatsoratra indray raha mpiasan'ny orinasa, na polisy na mpiasa hafa misy manakarama manokana ireo mpanasivana ireo.
Izay sehatra tsy manaraka ny lasitra napetraky ny manampahefana misahana ny fanivanana dia hampandoavina onitra na ho esorina hiala tsy ho an-tserasera intsony aza.